It is me. Ko Niknayman.: ဦးရွှေနှင့် ဦးကျင်ပိန်းတို့ အကြောင်း။
စွမ်းအားရှင် အတုံးကောင်နဲ့နအဖ သန်းရွှေလက်ဆွဲတော် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးရှိန်တို့ ထက် ပိုဆိုးသူကတော့ ၀ါဝါ၀င်းပဲစက်ရုံပိုင်ရှင် ဦးရွှေဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကနေ နအဖကို ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးအောင် ကြားထဲကနေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် နအဖ အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်လာကတည်းကနေ လုပ်ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရွှေရဲ့မြေးဖြစ်သူ မွေးနေ့ ပွဲပါတီကို ထရိတ်ဒါးဟော်တယ်မှာ ကျင်းပတုန်းက တရုတ်သံအမတ်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရုံတင်မကဘူး ရွှေမန်းတို့ ၊ သိန်းစိန်တို့ နဲ့သူ့ တို့ မိန်းမတွေ၊ အခြားသော နအဖအဖွဲ့ ဝင်တွေ၊ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးရွှေဟာ ရွှေသဇင်စင်ဒီကိတ်နဲ့ ဝါ၀ါဝင်းပဲစက်ရုံရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရုံသာမက ရတနာဆိုင်တော်တော်များများရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူပိုင်တဲ့ ရတနာဆိုင်တွေကတော့ လူသိများတဲ့ ရွှေနန်းတော်၊ စိန်နန်းတော်၊ ရတနာနန်းတော်၊ မြနန်းတော်နဲ့ဝါ၀ါဝင်းရွှေဆိုင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရတနာဆိုင်တွေကို သူ့ ရဲ့ သားဖြစ်သူ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်ဝင်းက တာဝန်ယူ ဦးစီးဆောင်ရွက်ပါတယ်။
ဦးရွှေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရွှေသဇင်စင်ဒီကိတ်ဟာ လော်စစ်ဟန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အေရှ (Asia World) နဲ့ဌေးမြင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ယုဇနနဲ့ လည်း ဖက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတာပါ။
ဦးရွှေဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရပိုင်းကနေ နအဖကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့ စစ်ထရပ်ကားအသစ်တွေကို တရုတ်-မြန်မာလမ်းကြောင်းကနေ သယ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ပေးနေပါတယ်။
နောက်တစ်ဦးကတော့ ဦးကျင်ပိန်း (ခ) လုကျင်ပိန်းဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ ရွှေလသာကုမ္မဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ဦးရွှေပိုင် ရွှေသဇင်စင်ဒီကိတ်ရဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဦးရွှေနဲ့ဦးကျင်းပိန်းတို့ ဟာလည်း စက်တင်ဘာလအတွင်းက ရဟန်းသံဃာများနဲ့ ပြည်သူများကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ဖို့နအဖက ဆောင်ရွက်တဲ့ထဲမှာ လူဆိုးလူမိုက်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ ရာဇ၀တ်သားတွေကို စုဆောင်းစီစဉ်ပေးခဲ့ရုံသာမက နအဖနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးတို့ ကြားမှာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဖော်လံဖားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
* (မှတ်ချက်။ ။ ယခုဖေါ်ပြနေသော စွမ်းအားရှင် အတုံးကောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးရှိန်၊ ဦးရွှေ၊ ဦးကျင်ပိန်းတို့အကြောင်းသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စာဖောက်နေသူများအဖြစ် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်မှ မပတ်သက်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်)။
Posted by Ko Niknayman at 11:43 AM